WLMP u taagan tahay Windows Live Movie Project iyo faylasha la kordhiyo .wlmp waxaa lagu asal ahaan odoroso files kuwaas oo abuuray isticmaalaya Windows Live Kan sameeyey Movie oo waa codsi software ee Windows ah. Files ayaa waxa guud ahaan loo adeegsado ujeedada dib-u-habaynta ee Live Kan sameeyey Movie. In kastoo kuwaas files WLMP eg file video ah, laakiin dhab ahaan, ma ay ansax video files laakiin files qoraal kuwaas oo loo abuuray photos, filimada, audio, music, video clips oo sawirro leh. Noocyadaas faylasha Qori jidka in files isha iyo Qori saamaynta, kala guurka filim, muusig iyo sidoo videos digital iyo sawiro in.
The files la kordhiyo .wlmp waxaa taageera oo kaliya Windows Live Movie Kan sameeyey, oo sidaas oo aysan furi karin on ciyaaryahan kale warbaahinta sida iPad, VLC, PSP, QuickTime, iPhone iyo kuwa kale. Oo sidaas waa marka aad u baahan tahay inuu ciyaaro files WLMP kasta oo ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta iyo qalabka kale ee la qaadi karo, ikhtiyaarka ugu fiican waa in iyaga loogu badalo in ay qaab MP4 in waxaa taageera dhamaan ciyaartoyda. Wareejinta waxaa ka mid ah WLMP in MP4 la eber tayada khasaaraha waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo converters video khaas ah sida Wondershare Video Converter Ultimate iyo kuwa kale.
Part1: Best MP4 in WLMP Converter for Windows / Mac
Part2: WLMP Free in MP4 Video Converter
Part3: Extended Knowlege u WLMP iyo MP4
Wondershare Video Converter Ultimate iyo List ah oo ay Features Muhiimka ah:
Diinta files WLMP in MP4 u baahan converters video iyo mid ka mid ah fursadaha ugu fiican in this category waa Wondershare Video Converter Ultimate. Software cajiibka ah ma aha oo kaliya badasha videos in qaabab kala duwan laakiin ay qaban karaan soo diyaariyeen ee hawlaha kale. Waxaa edit karaa, loo hagaajiyo, download, abaabulo, gubi, qabsadaan iyo sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato videos in ka badan 150 qaabab. Software waa la socon nidaamka Windows iyo Mac oo diyaar u ah version maxkamad la'aan ah madal Windows. Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare Video Converter Ultimate ku qoran yihiin hoos:
• Video degdeg ah oo aan khasaaraha tayada diinta, Wondershare Video Converter Ultimate waxay hubineysaa in aad si loogu badalo videos in qaabka loo baahan yahay iyo in sidoo kale aan laga badinin tayada wax. Oo weliba qaab beddelidda dhex software waa 30 jeer ka dhakhsi marka loo eego tartanka.
• Taageerada kala duwan oo fara badan oo qaabab: software wuxuu taageeraa in ka badan 150 qaabab oo sidaas aan loo eegayn wax kasta oo qaab aad raadinayso, software ah waxay yeelan doonaan mid aad u baahan yahay. 4K video waa mid ka mid ah waxaa dheer ugu danbeeyay ee liiska iyo bixisaa video tayo weyn.
• HEVC Support: software wuxuu taageeraa Karti Sare Video codec in ay awood u bixiya laba jeer riixo ka badan version hore iyo ilaaliyo tayada isku mid.
• Media geeyo: Wondershare Video Converter Ultimate kuu ogolaanaya in aad sii qulquli warbaahinta on smart iyo heerka TV isticmaalaya streamers warbaahinta sida Chromecast iyo kuwa kale.
• Taageerada DLNA: plugin ee software awood u warbaahinta hufan on qalabka certified DLNA iyo sidaas faylasha aad laga heli karaa noocyo kala duwan oo ah dhufto.
• iibsiga WiFi: Wondershare Video Converter Ultimate kuu ogolaanaya in aad u guurto aannu u jecel videos in aad Apple iyo sidoo kale qalabka Android bixisaa shabakad WiFi heli karo.
• qalabka ayeey: Ka sokow diinta, software kuu oggolaanayaa in aad wax ka bedel iyo aad u hagaajisid videos iyada oo liiska qalabka tafatirka. Oo sidaas waa la isticmaalayo software waxa aad xitaa shakhsiyeeyo karaa videos, si loo waafajiyo shuruudaha aad.
• download YouTube: software ayaa awood kuu siinayaa inaad kala soo baxdo videos ka YouTube si ay ka dib marka aanad haysan internet raaxaysan karaa. Waxaa intaa dheer, YouTube playlist ayaa sidoo kale waxaa lagala soo bixi karaa yaalla.
• Marka ay si gaar ah u yimaadda WLMP files, Wondershare Video Converter Ultimate awood u diinta, kuwaas oo kii iyaga uumay Movie Mashaariicda in MP4, MKV, AVI iyo qaabab kale oo badan. Si hadaba loogu sahlo loo maqli karo si sahlan, sidoo kale software sifooyinka filaayo in presets qalabka sida mobiilka, Madaxweyne Siilaanyo iyo kuwo kale. Aad gubtid kartaa videos ah Kan sameeyey Movie in DVD isticmaalaya foom oo menu.
Sida loo Beddelaan WLMP in MP4 la Wondershare Video Converter Ultimate
Hoos siiyo waa tallaabooyinka si loogu badalo WLMP in MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
Tallaabada 1 files Save WLMP sida video files
Ka hor inta aadan dhab ahaan bilaabaan hawlaha qaab beddelidda, in aad marka hore u baahan tahay si uu u badbaadiyo files mashruuca WLMP sida video files si ay loo rogi karaa iyada oo software Wondershare. Si loo badbaadiyo file mashruuca sida video files, waxaad u baahan tahay in ay sii wadaan Windows Live Movie Kan sameeyey, oo furo file WLMP ah. Haddaba tag, si ay "File" doorasho iyo dooro "Save Movie. FRO halkaas oo aad ku badbaadin karto files WLMP si aad u qaab wmv gooba kala duwan sida caadiga ah, widescreen, qeexitaanka sare iyo kuwa kale.
Tallaabada 2 Hadda, tallaabada xigta waa inaad kala soo baxdo, soo dajiyo iyo ka dibna la furo software ku saabsan Windows ama Mac.
Marka software la furay, shaashad sida hoos ku muuqan doonaa.
Tallaabada 3 dar files wmv
Hadda waxaad u baahan tahay in aad ku darto files wmv in Converter ah. (Files WLMP in uu badbaadeen sida wmv). Si aad ku dari files sidoo kale waxaad riixi kartaa on "Add Files" doorasho ama sidoo kale si fudud u soo jiidi kartaa jeedi files si ay interface ka.
Tallaabada 4 Dooro sida qaab saarka MP4
Haddaba markii files wmv waa la keeno, waxaad u baahan tahay in ay doortaan qaab saarka la doonayo. Tag ah "qaab Output" daaqadaha dhinacaaga midig iyo dhibic ka hoos menu tagaan si ay Qaabka> Video> MP4.
Talaabada 5 badalo
Ugu dambeyntii markii qaab wax soo saarka sida MP4 la soo xulay aad si fudud u baahan tahay inaad guji "Beddelaan" doorasho u bilowdo hawsha diinta.
Wondershare Video Converter Free iyo List ah oo ay Features Muhiimka ah:
Haddii aad raadinayso doorasho xor ah si loogu badalo aad files mashruuca WLMP in qaab MP4 markaas Wondershare Video Converter Free waa doorasho badnaayeen. Tani software cajiib ma aha lacag la'aan ah oo kaliya balse yimaado buuxaan liiska astaamaha si aad u ciyaari karaa jecel videos aad ku qalab kala duwan. Hoos siiyo waa qaababka ugu waaweyn ee software this.
• Taageerada qaabab kala duwan: Wondershare Video Converter Free aad u saamaxaaya in ay badalo videos aad jeceshahay iyo sidoo kale audio in qaabab kala duwan iyo sidaas iyaga ka dhigaa inay la jaanqaadaya si kala duwan ee qalabka. Qaar ka mid ah qaabab badan waxaa ka mid MP4, AVI, MOV, MKV iyo kuwa kale. Music soo saarista filimada ka waxaa sidoo kale fududeeyey software ah.
• haysaa tayada: Habka diinta ka dhex software ka qaadataa meel aan wax khasaare ah in tayada iyo sidaas aad u saamaxaaya in ay ku raaxaystaan ​​videos tayo fiican leh.
• qalabka ayeey: weheliyo diinta, Wondershare Video Converter Free sidoo kale fududeeyaa soo diyaariyeen ee ku-barnaamijka hawlaha tafatirka si ay u kor-aragnimo guud. Qaar ka mid ah qaababka ay taageerayaan software ka mid ah, isaga oo intaa raaciyay watermarks ah, isagoo intaa ku daray subtitles ah, falinjeeerka, biirtay, lana siii iyo kuwa kale.
• Speed ​​Fast: Thanks to NVIDIA CUDA iyo AMD technology ugu dambeeyay oo ay la socdaan Multi-Core taageero processor, software waxay bixisaa si degdeg ah xawaaraha diinta. Sida marka la barbar dhigo tartanka, waxay u bedeli karaan 30 jeer ka dhakhsi.
• YouTube Video Download: software ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay soo bixi videos ka YouTube iyo ilo online kale si ay iyaga offline sidoo raaxaystaan.
Sida loo Beddelaan WLMP in MP4 Isticmaalka Video badalo Wondershare
Hoos siiyo waa talaabada ugu by tilmaamaha tallaabo si loogu badalo files WLMP in qaab MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Free.
Tallaabada 1 Save WLMP sida video files
Waxa aad marka hore in loo baahan yahay in la sameeyo waa in lagu badbaadiyo file mashruuca WLMP in files video (wmv) oo taas waxaad u baahan tahay in la furo Kan sameeyey Windows Live Movie oo halkaasna ka sii taga "File" doorasho iyo "Save Movie" sida wmv.
Tallaabada 2 Open Wondershare Video Converter Free
Marka file la badbaadiyey sida file video aad u baahan tahay in la furo Wondershare Video Converter Free oo bogga ah sida hoos ku qoran muuqan doonaa.
Tallaabada 3 Add video files
Haddaba files WLMP in loo beddelay sida video files baahan yahay in la keeno ama ku daray in software ah. Waxaad ku dari kartaa faylasha ag maraya in ay "Add Files" doorasho ama ay soo jiiday oo iyaga u tiiri si interface software ah.
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan qaab wax soo saarka sida MP4 ah. Tag "Qaabka Output" suuqa kala dhinaca gacanta midigta oo ka soo daadiyaa menu dooro Qaabka> Video> MP4.
Talaabada 5 badalo si MP4
Hadda ugu dambeyntii guji "Beddelaan" si ay u bilaabaan habraaca ku-file ah diinta MP4.
Part3: Aqoonta Extended u WLMP iyo MP4
Project File Video File
Soo gaabinta for Windows Live Movie Project, WLMP waa qaab faylka ah mashruuca in la sameeyo iyada oo Windows Live Movie abuuray. Noocyadaas qaabka faylka ku jira kala guurka filim, xiriir la sawiro digital iyo videos, saamaynta, music iyo kala guurka movie. Kuwani files WLMP waxa kaliya ee ay taageerto Windows Live Movie Kan sameeyey, iyo si uu wax uga furo ciyaartoyda kale ee warbaahinta ama aaladaha la qaadi karo ay u baahan yihiin in la diinta qaabab kale oo lagu dhegeysan sida MP4. Sida caadiga ah loo yaqaan qaab MP4 asal ahaan waa MPEG-4 Qaybta 14 qaab oo sidoo kale loo yaqaan MPEG-4 AVC meesha AVC u taagan tahay Advanced Video sireed. MP4 waa qayb ka mid ah koox MPEG ah oo ay tahay qaab weel oo awood isku dhafan ee audio, subtitles, video iyo weli sawirada mid ka mid file hal. MP4 waa mid ka mid ah inta badan la isticmaalo qaabab waa la jaan qaada intooda badan ciyaartoyda warbaahinta iyo sidoo kale qalabka la qaadi karo.
Windows Live Movie Kan sameeyey,
• K-Guddomiyeyaasha Player
• KMPlayer The
Microsoft Guuritaanka Picture Group Expert (MPEG)
• Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si wmv
• Sida loo rogo ama Windows Kan sameeyey Movie Faylal ay si MP4
• Wikipedia ku saabsan MPEG-4 Part 14
• MP4 File Extension Details iyo Talooyin
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan WLMP in MP4 la Loss Tayada Zero